NASA uye yemahara software: inovimbisa nyaya | Linux Vakapindwa muropa
La NASA Akave achishandisa Linux uye yakavhurwa sosi kwenguva yakareba mune mazhinji emapurojekiti ake, sekukuudza kwatakaita mune zvimwe zvinyorwa zveLxA. Iri sangano rinoenderana nehurumende yeAmerica yemubatanidzwa inozivikanwa kune vese zvirongwa zvepakati, pamwe nezvirongwa zvemuchadenga, mukati mayo mune zviuru nezviuru zvemitsara yakavhurika sosi ...
Pano iwe unogona kuziva mamwe eaya mapurojekiti ivo vari kushandisa kodhi iyi mukati. Uye chakanakisa pane zvese ndechekuti ivo vari kuwedzera ...
2 Zvimwe zvirongwa
NASA inoshandisa supercomputers iyo inoshandisa GNU / Linux senge inoshanda sisitimu, kuwedzera kune mamwe emahara kana akavhurwa sosi software mapurojekiti. Iyi michina mikuru ine mazita akaita sePleiades, Electra, Aitken, Merope, uye Endeavor, iri paAmes Research Center. Muchokwadi, Pleiades ndeimwe yemasimba makuru epamusoro mumakomputa pasi rese maererano neTop500 rondedzero.
Iyi supercomputer ine 241.108 CPU cores, uye 211.968 GB yekurangarira. Uye zvese izvo zvakarongedzwa neanoshanda system SUSE Linux Enterprise Server (SLES).
Pamusoro peizvozvo, NASA yatanga imwe yemapurogiramu anonakidza nhasi padanho renzvimbo. Ndezve Artemis. Izvo zvakagadzirirwa kumisikidza yakagadzikana nyuchi paMwedzi, uye kune izvi ivo vari kushandisa komputa sisitimu yekuenzanisa iyo inoshandisa Linux.
Izvo zvinoitika neimwe yezvikamu zvaro, senge chirongwa chayo Center yeClimate Simulation, iyo inoshandisa akateedzana masumbu ayo anoshandawo nekutenda kune Linux kernel uye mamwe akavhurwa sosi mapurojekiti.
Pamusoro peaya makomputa makuru, NASA zvakare ine mamwe mapurojekiti uye zvirongwa zvinotsigirwa neLinux nemamwe mapakeji esoftware. open source software. Kunyangwe NASA pachayo yakagadzira yakafara katarogu yemapurojekiti akavhurika sosi, ichitove neanopfuura mazana mashanu emasaiti senge GitLab uye 500 repositori paGitHub.
Kana iwe uchida kuziva mamwe acho, pano iwe enda zvimwe zvinozivikanwa:
OpenMCT- dhizaini yekuratidzira dhata yeanotevera-chizvarwa mashandiro. Iyo webhu-based, yedesktop uye nhare. Iyo inoshandiswa seyekushandisa kuona data rekutsigira mamishinari mazhinji paNASA Jet Propulsion Laboratory uye Ames Research Center, senge kutsigira kuvandudzwa kwemwedzi wemwedzi rover mission pfungwa. Zvese zviri pasi peApaceh 2.0 rezinesi.
Mhepo yepasirese- Imwe yemapurojekiti eNASA anozivikanwa kwazvo akavhurwa. Iyo inogonesa vanogadzira kuti vagadzire ekudyidzana ekuratidzira kweiyo geographic ruzivo rwepasi mu 3D. Masangano kutenderera pasirese anoshandisa iyo kuongorora mamiriro ekunze, terrain, track mota, kuongorora geospatial data, nezvimwe.
ISS: Iyo International Space Station, sezvatakataridza muLxA, yakachinja masystem ayo eMicrosoft Windows XP kuita Debian GNU / Linux. Aya masisitimu anoita basa rakakosha murabhoritari yesainzi uye mubhedha wekuyedza pane ino huru yekuita satellite. Uye zvakare, vafambi vengarava vaizoshandisawo maLinux-based laptops, uye akavhura masosi mapurojekiti akananga kune ISS ari kuvandudzwa. Semuenzaniso, Astrobee Robot Software.
CubeSat- Chirongwa chekugonesa Ka-bhandi kunayisa radar matekinoroji pamutengo wakaderera, unokurumidza-kupindura mapuratifomu. Yakatangwa pane ELaNa-23 mishoni mukati meCygnus CRS-9 munzira inoenda kuISS, uko yakaendeswa muna Chikunguru 13, 2018 kuburikidza neiyo JEM airlock. Uye zvakare, maLinux-based avionics masisitimu anoshandiswa zvakare kune ichi chinangwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » NASA uye yemahara software: inovimbisa nyaya